ifont အသုံးပြုနည်း « XMS-MMF
လိုချင်တဲ့ဖောင့်ကို တွေ့ပီဆိုရင် enter နှိပ်ပါ။ ဇော်ဂျီဖောင့် သုံးလိုသူများ qlassik & zawgyi one ကိုသာေ၇ွး၇န်၊ unicode သုံးချင်သူများ padauk and myanmar3 ကိုရွေးရန်
ပီးရင် သင့်ဖုန်းလေး reboot ကျသွားမယ် ပြန်တက်လာရင်တော့ သင် apply လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဖောင့်လေး မြင်ရပါပီ…
ကို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်လာပီဆိုရင်တော့ အောက်က ဖောင့်လေးများကို ထပ်မံဖြည့်သွင်းပီး စာလုံးလှလှလေးများ သုံးနိုင်ကြပါတယ်… မခက်ခဲပါဘူး...
ဖောင့်တွေကို ဒေါင်းပီး မန်မို၇ီကတ်ထဲထည့်ပါ ပီး၇င် ifont ကိုဝင် my button အပေါ်ညာဘက်က ခလုတ်ကိုနှိပ်ပီး .ttf file အတွက် my font ကိုဝင် စာပိုဒ်တခုပါတဲ့ စာမျက်နှာေ၇ာက်မယ် click here ဆိုတဲ့ အနီေ၇ာင် စာလုံးကို နှိပ်. ဒေါင်းထားတဲ့ ဖောင့်ကိုေ၇ွး..., .
.apk အတွက် my install ကိုသွားပီး run ထားတဲ့ မြန်မာဖောင့် apk လေးကိုေ၇ွးပေးလိုက်ပါ...
ဒါဆို ထပ်တိုး မြန်မာဖောင့်တွေ ၇ပီ.... theme ကနေ select လုပ်တာတော့ အပေါ်က နည်းတွေနဲ့ အတူတူပဲမို့ လုပ်တတ်မယ် ထင်ပါတယ်…..
ဒီဗားရှင်းမှာ အသစ်တိုးလာတာကတော့ color font ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် သူက fonter app လိုမျိုး ဖောင့်ကာလာထည့်လို့ရတယ် bold, italic, bold and italic ဆိုတာတွေပါ ချိန်းလို့ရသွားပါမယ်… သင်ဟာ ကလိရတာ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့ အခုပဲ ဒေါင်းပီးသာ ကလိလိုက်ပါ….
ကွာသွားတာက miui theme ထဲမှာ apply သွားလုပ်စရာ မလိုတော့တဲ့ အတွက် credit တောင်းမှာ မပူရတော့ပါဘူး… ဖောင့်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တိုင်း reboot ကျသွားတာလေး တစ်ခုပါပဲ…..
ကဲ ဒီလောက်ဆို သင်လည်း စမ်းချင်ရောပေါ့
(တစ်ချို့ i font သုံးပြီး Logo မှာ ရပ်နေတာမျိုးတော့ကြုံ ကြပါတယ် (ဖြည့်စွတ်ချက်) Credit to Thin Htay Ag 6:50:00 AM